Yan Aung: August 2009
စက်ဘီးစီးခြင်း အက်ဆေး (၅)
ကျွန်တော် မန္တလေးကို ရောက်တော့ ဆယ်တန်းဖြေပြီးခါစ အချိန်ပေါ့.
နဂိုကတည်းကမှ မန္တလေးက ပူအိုက်တဲ့နေရာမှာ နာမည်ကြီးရတဲ့အထဲ ကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်က မတ်လအလယ်ကြီးဖြစ်နေတော့ အားပါးပါး ဘာပြောကောင်းလိုက်မလဲ…
ကျွန်တော်အဲဒီ့တုန်းက တက္ကသိုလ်တက်ဖို့ စောင့်နေချိန်ပါ. အမှတ်ဘယ်လောက်ရပြီး ဘာတွေ ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာ မသိသေးချိန်မှာ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တော့ မန္တလေးမြို့အနှံ့ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် လျှောက်သွားနေခဲ့ပါတယ်.
မှတ်မှတ်ရရ တစ်ခုသော တနင်္ဂနွေမှာ အမေနဲ့ ကျွန်တော် ဘုရားကြီးဖက်ကို စက်ဘီးတစ်စီးနဲ့ ဘုရားဖူးထွက်ခဲ့ကြပါတယ်. ညနေချမ်းလေးမှာ သားအမိနှစ်ယောက် ဘုရားကြီးဖက်ကို စက်ဘီးလေးနင်းသွားရတာ ပြန်တွေးကြည့်လိုက်ရင် ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာတော့ ကောင်းလှပါတယ်. အမေ့ခန္ဓာကိုယ်သေးသေးလေးကို ကျွန်တော့်စက်ဘီးထိုင်ခုံနောက်မှာ အရင်တင်ထိုင်ခိုင်းပြီး စက်ဘီးကို နှစ်လှိမ့်သုံးလှိမ့် လှိမ့်ခါ အပေါ်ကို တက်ရင်း လေဆန်ကိုနင်းနေတဲ့ ကျွန်တော့်ခါးကို အမေက အားကိုးတကြီးနဲ့ ဖက်ထားလေရဲ့…
အင်း… ကျွန်တော် အရွယ်ရောက်ခဲ့ပြီပဲ အမေ….
ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်လောက်က စစ်တွေမှာ အမေနဲ့ အစ်ကို ဈေးသွားဝယ်ရင် စက်ဘီးနင်းနေတဲ့ အစ်ကို့နေရာမှာ ၀င်ပြီး နေရာယူချင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော် အခုတော့ အဲဒီ့နေရာကို ရောက်နေခဲ့ပြီ အမေ.
မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးထဲကို အ၀င်မှာ စက်ဘီးအပ်ရတဲ့ နေရာလေးရှိပါတယ်. အဲဒီ့မှာ စက်ဘီးကို ၀င်အပ်ပြီး သားအမိနှစ်ယောက် သပြေပန်းလေးတွေဝယ်ခါ မရောက်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ဘုရားကြီးကို ဖူးမြော်ဖို့ ကျောက်ပြားခင်းလမ်းလေးအတိုင်း တက်လာခဲ့ကြပါတယ်. ကျွန်တော်တို့ တက်ဖြစ်တာ မြောက်ဖက်မုခ်က ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်. လိပ်ကန်နဲ့ ဗုဒ္ဓ၀င်ပြတိုက် ရှိတဲ့ဖက်ခြမ်းကပေါ့…
ဘုရားကြီးမှာ ဘုရားဝတ်ပြုပြီးတော့ ကျွန်တော် ရွှေပြားကပ်လှူပါတယ်. ပြီးတော့ ကျွန်တော့်မွေးနံထောင့်ကိုသွား၊ ရေသပ္ပါယ်၊ ပုတီးစိပ်၊ မေတ္တာပို့… အဲဒီ့ကမှတဆင့် ဂြိုဟ်ပြေနံပြေဘုရားဖက်ကိုသွား၊ အမေနဲ့အတူ ရေသပ္ပါယ်. အမွှေးတိုင်လှူ၊ ဖယောင်းတိုင်ထွန်းရင်းနဲ့ အာရုံပြုကြပါတယ်. ဘုရားကြီးကို လက်ျာရစ်လှည့်နေရင်းနဲ့ အမေ့မျက်နှာကို တစ်ချက်ကြည့်မိခိုက်မှာ စိတ်ထဲက တစ်ခုကို ပြင်းပြင်းပျပျဆုတောင်းမိလိုက်တယ်.
‘အဖေသာ ရှိနေသေးရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ အဖေရယ်…’
အဲဒီ့နောက်ပိုင်းတော့ အခါအခွင့်သင့်သလို အမေနဲ့ ကျွန်တော် ဘုရားကြီးဖက်ကို စက်ဘီးတစ်စီးနဲ့ ခဏခဏ ရောက်ဖြစ်ပါတယ်.
အောင်စာရင်းတွေထွက်ပြီးနောက် ကျောင်းသားမိဘတစ်ချို့ ကျွန်တော့်ဆီ သူတို့ကလေးတွေကို စာသင်ပေးဖို့ လာအပ်ရင်းက ကျွန်တော်လည်း Study Guide လိုင်းဖက်ကို စရောက်ခဲ့ပါတော့တယ်.
ကျွန်တော်စာသင်တာ ဟိုး ၃ တန်း၊ ၄ တန်းကနေပြီးတော့ ၈ တန်းနဲ့ ၁၀ တန်းထိ အတန်းစုံကို သင်ဖြစ်ပါတယ်. အိမ်မှာလည်း ၀ိုင်းခေါ်သင်သလို အပြင်ကိုလည်း လိုက်သင်ပါတယ်. အဲဒီ့မှာ ကျွန်တော် စက်ဘီးအသစ်တစ်စီးဝယ်ဖို့ အကြောင်းဖန်လာပါတော့တယ်. အဲဒီ့အချိန်တုန်းက စီးနေတဲ့ဘီးက ဆိတ်ငါးကောင် မိန်းမစီးဘီးလေးပါ.
ကျွန်တော် Guide လုပ်ပြီး ၃ လမြောက်လောက်မှာ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်. ကျွန်တော် စက်ဘီးအသစ်လေး တစ်စီး ၀ယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်. ဂီယာ ၃ ချက်ပါတဲ့ မိကျောင်းဘီးလေးပါ. Crocodile ဘီး နီညိုရောင်လေးပေါ့.
အဲဒီ့ဘီးလေးရပြီးနောက်ပိုင်း ကျွန်တော်တစ်ယောက် ပိုပြီး လမ်းများလာခဲ့ပါတော့တယ်. စက်ဘီးလေးကလည်း ရွှီးခနဲ ရွှီးခနဲ ပြေးသလို ကျွန်တော်တစ်ယောက်လည်း စက်ဘီးကို လုံးဝဆက်နင်းချင်စိတ်မရှိတော့လောက်အောင် ခွန်အားကုန်သွားတဲ့အထိ မန္တလေးမြို့အနှံ့လျှောက်သွားနေခဲ့ပါတယ်. ကုန်းဆင်းကုန်းတက်မှာ ဂီယာလေးကို လိုသလိုကစားရင်း နင်းနေတဲ့ ကျွန်တော့်ဘေးနားက ဆိုင်ကယ်တွေ တ၀ီဝီနဲ့ ဖြတ်ကျော်သွားခဲ့ပေမယ့် ကျွန်တော် ပျော်ပိုက်နေခဲ့တယ်. ရှိတာလေးနဲ့ သိမ်ငယ်စိတ်မ၀င်ဘဲ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ နေနိုင်ခြင်းဟာလည်း မင်္ဂလာတစ်ပါးပဲလို့ ကျွန်တော်ယူဆတယ်လေ. ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ အခုချိန်ထိ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးတောင် မပိုင်ခဲ့ဖူးပါဘူး. အဟတ်.
နောက်ပိုင်း ကျွန်တော်စာသင်ရတဲ့ ကျောင်းသားတွေ ပိုများလာသလို နေရာတွေလည်းပိုစုံလာတော့ မရည်ရွယ်ဘဲနဲ့ကို ကျွန်တော်နေရာအနှံ့ စက်ဘီးတစ်စီးနဲ့ ခြေစကြာလှည့်ဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်.
နန်းရှေ့မှာ ကျွန်တော်စာသင်သလို မြို့သစ်မှာလည်း သွားသင်ပါတယ်. ပြီးတော့ အိမ်မှာလည်း ၀ိုင်းတွေခေါ်သင်သလို အင်္ဂလိပ်စပီကင်နဲ့ ဂစ်တာသင်တန်းကလည်း တက်လိုက်ပါသေးတယ်. ကျွန်တော်တက်ဖြစ်တဲ့ စပီကင်က ဦးစိုးနိုင်ထွန်းနဲ့ Ms. Collin ပါ. ဂစ်တာသင်တန်းကတော့ ပန်းဥယျာဉ်လို့ ထင်ပါတယ်.
စနေ တနင်္ဂနွေဆိုရင် နန်းတွင်းထဲက စစ်တပ်ကဖွင့်တဲ့ ရေကူးသင်တန်းကိုလည်း သွားတက်ပါသေးတယ်. ကြားရက်တွေထဲမှာတော့ မနက်ခင်းကို ရေသွားကူးတယ်. နေ့ခင်းတွေ ကျောင်းသားတွေ စာမသင်ရချိန်မှာ စာကြည့်တိုက်ကြီးထဲ ကျွန်တော် တစ်ယောက် စာအုပ်တွေနဲ့ နပန်းလုံးနေတတ်တယ်.
ကျွန်တော် စက်မှုတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရတဲ့နောက် စာသင်ချိန်တွေကို လျှော့ချပစ်လိုက်ပါတယ်. အထူးသဖြင့် ကလေးတန်းတွေကို ကျွန်တော်မသင်ဖြစ်တော့ပါဘူး. သူငယ်ချင်းအသစ်တွေ ရလာသလို ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး နယ်ပယ်ပိုကျယ်လာတဲ့အလျောက် ကျွန်တော်လည်း တစ်နေ့တစ်နေ့ အိမ်ကို ကပ်တယ်ရယ်လို့မရှိတော့ပါဘူး.
ဒီကြားထဲ နန်းရှေ့က လင်းရောင်ခြည် စာကြည့်တိုက်မှာ ညနေပိုင်း Volunteer အဖြစ် ကျွန်တော်ဝင်လုပ်လိုက်သေးတယ်. အဲဒီ့ စာကြည့်တိုက်လေးက ရပ်ကွက်ထဲကပဲ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ထူထောင်ထားကြတာပေါ့. ညနေခင်း ၄ နာရီကနေ ည ၉ နာရီထိ ဖွင့်တယ်. ကျွန်တော် ညတိုင်းအဲဒီ့စာကြည့်တိုက်လေးမှာ အကူဝန်ထမ်းလုပ်ပေးရင်း ရှေးဟောင်းစာအုပ်တွေကိုလည်း ကြောင်ပုစွန်စား ကျွတ်ကျွတ်ဝါးရင်းနဲ့ ညနေခင်းတွေကို ကုန်ဆုံးစေခဲ့တယ်.
စာကြည့်တိုက်က သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ ကိုတင်မောင်ဆွေတို့၊ သင်းသင်းတို့၊ မာလာတို့ နီလာတို့၊ အစ်မကြီးလို့ ခေါ်လေ့ရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘဏ္ဌာရေးမှူးတို့နဲ့ အလုပ်လုပ်လိုက်၊ မုန့်တွေအတူထွက်စားလိုက်၊ စလိုက်နောက်လိုက်၊ စာကြည့်တိုက်ပိတ်ရင်လည်း ဟိုဟိုဒီဒီလျှောက်သွားလိုက်နဲ့ တော်တော်လေး ပျော်ဖို့ကောင်းခဲ့ကြပါတယ်. ပန်တျာကျောင်းဝင်းကြီးထဲက ပုံပုံလို့ခေါ်တဲ့ ကောင်မလေးကလည်း ငယ်ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့နဲ့ သူငယ်ချင်းပေါင်းပေါင်းခဲ့ကြတာပေါ့.
တစ်ရက်တစ်ရက် မနက်ခင်း မိုးလင်းကတည်းက စက်ဘီးတစ်စီးနဲ့ ထွက်ချသွားလိုက်တာ တစ်ခါတစ်လေ နေ့ခင်းစာတောင် ပြန်မစားဘူး. နီးရာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ပလာတာဖြစ်ဖြစ်၊ ပေါက်စီဖြစ်ဖြစ်၊ ထမင်းသုပ်လေးတစ်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ် စားပြီး ညနေစောင်းထိ အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်ကြီးမှာ ကျွန်တော်အချိန်ကုန်ခဲ့တယ်. တက္ကသိုလ်တွေ ပြန်ပိတ်သွားလို့ ဖွင့်ဖို့ စောင့်နေချိန်မှာ ကျွန်တော် စာတွေကို အတိုးချဖတ်ခဲ့တယ်. စာကြည့်တိုက်ကြီးက ၀န်ထမ်းတွေဆို ကျွန်တော့်ကို အကုန်လုံးသိနေကြတယ်.
ကျွန်တော်ကလည်း အဲဒီ့တုန်းက စာဖတ်တာ တော်တော်ကို လောဘကြီးတာလား. အိမ်ကို ငှားရုံတင်မကဘူး. စာကြည့်တိုက်ကြီးကနေ ယူသွားခွင့် မပြုတဲ့ Reference section မှာလည်း ကောင်းနိုးရာရာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာတွေကို စာအုပ်တစ်အုပ်နဲ့ ရေးမှတ်ခဲ့တယ်. ကျွန်တော့်မှာ အဲလို မှတ်စုစာအုပ်လေးတွေ တော်တော်များတယ်ဗျ. အဲဒါလေးတွေရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့်လည်း ကျွန်တော် မြန်မာစာလေ့လာမှုအပိုင်းမှာ တစ်နေ့တစ်ခြား ပိုတိုးတက်လာခဲ့တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်. ညနေ စာကြည့်တိုက်ကြီး ပိတ်ချိန်ဆိုကျွန်တော့် စက်ဘီးကယ်ရီယာက ညှပ်လေးထဲမှာ အနည်းဆုံး သုံးလေးအုပ်လောက်တော့ ပါလာမြဲပဲ. တစ်ပတ်ကို စာအုပ် အနည်းဆုံး ၃ အုပ်ပြီးအောင် ဖတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကို သတ်မှတ်ပြီး ဖတ်ခဲ့တာ. အခုအချိန်မှာ အဲလိုမျိုး လွတ်လွတ်လပ်လပ် စာပေလေ့လာခွင့်လေးတွေ ပြန်ရချင်လိုက်တာ…
ညနေ ၄ နာရီမှာ စာကြည့်တိုက်ကြီးလည်းပိတ်ပြီဆိုတော့မှ ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ပါတယ်. ရေမိုးချိုး ထမင်းစားပြီးတော့ ၅ နာရီလောက်မှာ Guide တွေကို လိုက်သင်ပါတော့တယ်. ည ၁၁ နာရီလောက်ကျမှ ကျွန်တော် အိမ်ပြန်ရောက်တယ်. တက္ကသိုလ်တွေ ပိတ်ထားချိန်မို့လို့လည်း အတိုးချပြီး သင်နိုင်တာပေါ့.. အဲဒီ့တုန်းက ပိုက်ဆံလည်း ၀င်သလို စာအုပ်တွေလည်း တော်တော်ဝင်ပါတယ်.
မြူမှုန်တွေကြားက ရေတံခွန်တောင်တန်းနဲ့ ရန်ကင်းတောင်
၂၉ လမ်းပေါ်က နဂါးစာပေတို့၊ ၈၄ လမ်းမကြီးပေါ်က လူထုစာပေတိုက်တို့၊ ဈေးချိုနားက ရဲရင့်စာပေတို့၊ ညနေ နေစောင်းရင် ၈၄ လမ်းမှာ ဖြစ်လာတဲ့ ညဈေးတန်းက လမ်းဘေးမှာ ချရောင်းတဲ့ စာအုပ်အဟောင်းဆိုင်တို့တွေဆိုတာ ကျွန်တော် ကျင်လည်ကျက်စားနေခဲ့တဲ့ နေရာလေးတွေ ဖြစ်ခဲ့တယ်.
ကျွန်တော် စာသင်တဲ့ ကျောင်းသားတွေကို အချိန်ခွဲပေးရတဲ့ ပုံစံလေးနည်းနည်းရှင်းပြဦးမှ ဖြစ်မယ်ဗျ.
ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကို တစ်ပတ်မှာ ၃ ရက် (သို့) ၅ ရက်ပေးသင်ပါတယ်. တစ်ချိန်ကို ၁ နာရီခွဲ ကနေ ၃ နာရီထိ ရှိပါတယ်. Guide လစာပေါ်မူတည်ပြီး အချိန်တွေ ခွဲဝေပေးတာမျိုးလည်း ရှိတာပေါ့. ပုံမှန်ကတော့တစ်ယောက်ကို တစ်ပတ် ၅ ရက်ပေးပါတယ်. တစ်ချိန်ကို ၂ နာရီ ကျွန်တော်သင်ပါတယ်. အဲဒီ့တုန်းက ၁၉၉၆ ပေါ့နော်. ကျွန်တော် ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကို ၃၀၀၀ လားမသိဘူး ယူတယ်ဗျ. (ဟဲဟဲ. ခုတော့ မရတော့ဘူးနော်. ဒေါ်လာနဲ့မှ. ဟတ်ဟတ်)
ကျောင်းသားတွေကို စနေ၊ တနင်္ဂနွေဖက် အချိန်များများယူပြီးသင်ပါတယ်. ဒါမှ Weekdays တွေမှာ ကျွန်တော့် စိတ်ကြိုက်လုပ်ချင်တာတွေ လုပ်လို့ရအောင်ပေါ့. လုပ်ချင်တာလုပ်တယ်ဆိုတာကလည်း သင်တန်းတွေတက်တာတို့၊ ကျောင်းပိတ်ထားပေမယ့် ကျူရှင်ဖွင့်ပြီး ဆက်သင်ပေးနေတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကျောင်းစာတွေအတွက် သင်တန်းဆက်တက်တာတို့ပါ. အဲဒီ့တုန်းက တော်တော်လည်း အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့သလို တော်တော်လေးလည်း productive ဖြစ်ခဲ့တယ်. အခုလိုမျိုး တစ်လနေမှ ဘလော့ဂ်ပို့စ်တစ်ခုလောက် ထွက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တော့ ကွာပါ့ဗျာ. ဟတ်ဟတ်.
စီးပွားရေးလည်း တော်တော်လေး သောင်းကျန်းခဲ့တယ်ဗျ. အဲဒီ့တုန်းက ကျွန်တော့်မှာ ကျောင်းသား ၇ ယောက်လောက် တစ်ပြိုင်တည်း ရှိနေတတ်တယ်. တစ်ချို့က အပြင်ဖြေတွေဆိုတော့ အချိန်ဇယားဆွဲရတာ ပိုလို့တောင် အဆင်ပြေနေတတ်သေးတယ်. ကျွန်တော်တက်တဲ့ သင်တန်းတွေ၊ ကျူရှင်တွေအတွက်သာမက အိမ်ကိုပါ အပိုသယ်လာနိုင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်ကို အမေနဲ့ အစ်မကလည်း ငါ့သားငါ့သား၊ မောင်လေးမောင်လေးနဲ့ နေတာပဲ. ဟတ်ဟတ်.
အဲဒီ့တုန်းက အားခဲပြီး မတက်ဖြစ်လိုက်တဲ့သင်တန်း တစ်ခုပဲ ရှိခဲ့တယ်. အဲဒါကတော့ ထွန်း အီလက်ထရောနစ် သင်တန်းပဲ. တက်မယ်တက်မယ်နဲ့ သူ့အချိန်က မကိုက်တာနဲ့. ကိုယ့်အချိန်က မပေးနိုင်တာနဲ့ပဲ အီးယောအီးယောဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးမတက်ဖြစ်လိုက်တော့ဘူး.
မန္တလေးမှာ ကျွန်တော်လေးနှစ်နေခဲ့တယ်. နေခဲ့တဲ့ အချိန်လေးနှစ်လုံး အကျိုးရှိခဲ့တယ်. ကျွန်တော့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ အများကြီး ပြောင်းလဲတိုးတက်ခဲ့တယ်. စာပေလေ့လာမှု အရှိန်တဟုန်ထိုး တိုးတက်ခဲ့တယ်. ဘ၀တစ်သက်တာလုံး သတိရနေစေမယ့် မိတ်ဆွေကောင်းအဖော်မွန်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံ ရင်းနှီးခဲ့တယ်. ကျွန်တော် ရန်ကုန်ရောက်တော့တောင် မန္တလေးမှာနေတုန်းကလောက် စာသိပ်မဖတ်ဖြစ်တော့ဘူး.. အဲဒီ့တုန်းက လေ့လာပျိုးထောင်ခဲ့တဲ့ အရှိန်အဟုန်တွေနဲ့ ကျွန်တော် ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာ ဒီလို ရပ်တည်နေနိုင်တာဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး.
ပိုပြီးတော့ ဒီပို့စ်လေးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်.
ကျွန်တော် စက်ဘီးစီးတာလည်း တော်တော်လေး ကျွမ်းကျင်လာခဲ့တယ်. 
စက်ဘီးကို လက်လွှတ်စီးတာလောက်တော့ စကားထဲ ထည့်မပြောတော့ဘူး. လမ်းကြိုလမ်းကြားလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကားကြိုကားကြားလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် စက်ဘီးပေါ်ကနေ မဆင်းရဘဲ လှိမ့်ရုံလေးလှိမ့်ပြီး လက်ကိုင်ကို ဟိုဖက်ယမ်းလိုက် ဒီဖက်ယမ်းလိုက်နဲ့ ဟန်ချက်ညီညီထိန်းလို့ ဘရိတ်ကို ကစားပြီး နင်းသွားတာ တော်တော်လေးတော့ ပညာသားပါတယ်ဗျ
နောက်ပြီးတော့ စက်ဘီးကို တစ်ဖက်က စီးနေရင်းနဲ့ နောက်လက်တစ်ဖက်က နောက်ထပ် စက်ဘီးတစ်စီးကို တွန်းလာတာမျိုးရော မြင်ဖူးကြလား၊ လုပ်ဖူးကြလား.
ကျွန်တော်တော့ သူများတွေလုပ်တာလည်း မြင်ဖူးတယ်. ကိုယ်တိုင်လည်း လုပ်ဖူးတယ်.
သူကလည်း ပညာသားပါတယ်နော်. စဉ်းစားကြည့်လေ. ဒီတိုင်း စက်ဘီးတစ်စီးတည်း စီးတာတောင် ဟန်ချက်ညီညီစီးနေရတာကို နောက်ထပ်တစ်ဘီးကိုပါ တွန်းဖို့ဆိုတော့ အန္တရာယ်လည်း များတယ်. လွယ်လည်းမလွယ်လှဘူးလေ.
ကျွန်တော် စကြိုးစားကြည့်တော့ ပစ်လဲပါတယ်. ဟတ်ဟတ်. မညာဘူးနော်. အားပါး ဘာပြောကောင်းမလဲ. လဲတာမှ စက်ဘီးနှစ်စီးကြားထဲကို ညပ်သွားတာ. စက်ဘီးစီးကျွမ်းလာပြီဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မနာအောင်၊ လွတ်အောင်တော့ ရှောင်တတ်လာပါတယ်.
စက်ဘီးနောက်တစ်ဘီးကို တွန်းရင်း နင်းတော့မယ်ဆိုရင် ပထမဦးဆုံး ပင်မ ကိုယ်စီးမယ့် စက်ဘီးပေါ် အရင်တက်ထိုင်ထားရပါမယ်. ခြေထောက်နဲ့ မြေကြီးကိုထောက်ထားချိန်မှာ ဘယ်ဖက်လက်က ကိုယ်စီးမယ့်စက်ဘီးလက်ကိုင်ကို ကိုင်ထားရင်း ညာဖက်လက်ကတော့ ကိုယ်တွန်းမယ့် စက်ဘီးရဲ့ ဘယ်ဖက်လက်ကိုင်ကို ကိုင်ထားရပါတယ်. (ဘယ်ဖက်ကိုပဲ ကိုင်ရတာနော်. ညာဖက်လက်ကိုင်ကိုသွားကိုင်ရင် တွန်းတဲ့စက်ဘီးက ကိုယ့်ဖက်ထဲ ဆွဲဝင်လာပြီး အချင်းချင်းငြိလို့ ပစ်လဲတတ်ပါတယ်)
ပြီးလည်းပြီးရော ခြေထောက်ကို အသာလေးလွှတ်လိုက်ပြီး အရှိန်လေးတဖြည်းဖြည်းယူလို့ နင်းသွားရပါတယ်. မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်နော်. ဘယ်ဖက်လက်နဲ့ နောက်ဘရိတ်လေးကို ကစားရင်း ပင်မစက်ဘီးကိုနင်းသွားချိန်မှာ ညာဖက်လက်နဲ့ တွန်းရမယ့် စက်ဘီးလက်ကိုင်ရဲ့ ဘယ်ဖက်လက်ကိုင်ကို ကိုင်ထားရင်း နင်းသွားတာ.
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် မိတ္ထီလာကနေ မန္တလေးကို အလည်လာတော့ စက်ဘီးအပိုတစ်စီးလိုလို့ ကျွန်တော်နေတဲ့ ၂၉ လမ်းကနေ ဘုရားကြီးအထိ အဲဒီ့လိုမျိုး စက်ဘီးနှစ်စီး တစ်ပြိုင်တည်းနင်းသွားခဲ့ဖူးပါတယ်. သူတို့က ကားကြီးဝင်းကနေ ဘုရားကြီးထိ လိုင်းကားစီးပြီး စောင့်နေခဲ့တာပေါ့.
အင်း. ရင်ခုန်စရာလည်း ကောင်းသလို ပျော်စရာလည်း ကောင်းပါတယ်. တစ်ခါတစ်လေ အဲဒီ့လိုမျိုး စွန့်စွန့်စားစားလုပ်လိုက်ရတဲ့ အရာမျိုးလေးတွေ အောင်မြင်သွားရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်ကိုးစားစိတ် ပိုမို ပြင်းပြလာတတ်တယ်ဗျ. မအောင်မြင်တော့လည်း ပြန်ကြိုးစားပေါ့ဗျာ. (နောက်တစ်ခေါက် တိုက်ဆိုင်မှပဲ ကျွန်တော် ကားမောင်းသင်တုန်းက လမ်းဘေးမြောင်းထဲကို ထိုးကျသွားတဲ့ အကြောင်း ဖောက်သည်ချရဦးမယ်. ဟတ်ဟတ်)
မန္တလေးရဲ့ ညနေချမ်းလေးတွေကလည်း သိပ်ကို ကဗျာဆန်လွန်းပါတယ်လေ.
မန္တလေးမြို့ကြီးက ဝေါခနဲ အန်ချလိုက်တဲ့ စက်ဘီးတွေ လူတွေတရုံးရုံးနဲ့ လမ်းမတိုင်းမှာ ပြည့်နှက်စည်ကားလျက်၊ ရွှေနန်းတော်ကြီးက နေ၀င်ရီတရောမှာ ပြိုးပြိုးပျက်ပျက်လင်းလက်လျက်၊ ဟိုးအနောက်ဖက်ခပ်လှမ်းလှမ်းက ရွှေမင်းဝံ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးတလျှောက်က ဘုရားပုထိုးဖြူဖြူလေးတွေဆီက မီးရောင်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်လေးတွေ ထွန်းလင်းလျက်၊ ဟိုး တောင်ဖက်အရပ်ကို မျှော်လိုက်ပြန်ရင်လည်း မန္တလေးတောင်နဲ့ တောင်ထိပ်ပေါ်ကဘုရားလေးတွေက ကြည်ညိုသပ္ပါယ်စရာကောင်းလောက်အောင် တင့်တယ်လျက်….. အရှေ့စူးစူးကို ကြည့်ဦးမလား… ရန်ကင်းတောင်နဲ့ ရေတံခွန်တောင်တန်းတွေ၊ ရှမ်းရိုးမကြီးရဲ့ တစိတ်တဒေသ တောင်စွယ်တောင်ဖျားတွေပေါ်မှာ မြင်နေရတဲ့ မေမြို့ အနီးစခန်းက မီးရောင်ပြပြလေးတွေ…
ဒါတွေအားလုံး ခင်ဗျားရဲ့ ရင်ထဲကို စီးဝင်လာလိမ့်မယ်. ခင်ဗျားရဲ့ သွေးကြောထဲထိ စိမ့်ဝင်သွားလိမ့်မယ်. ခင်ဗျားရဲ့ နှလုံးသည်းပွတ်ထဲမှာ သိပ်သိပ်သည်းသည်း နေရာယူသွားလိမ့်မယ်.
စစ်ကိုင်းတံတားကြီးနဲ့ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးပေါ်က ဘုရားအဆူဆူ...
တစ်ခါတုန်းက လူနှစ်ယောက်ဟာ သူတို့ ချုပ်နှောင်ခံထားရတဲ့ အကျဉ်းထောင်လေးထဲကနေ ပြင်ပကို မျှော်ကြည့်ကြသတဲ့..
တစ်ယောက်သော အကျဉ်းသားက သူ့ပြတင်းပေါက်လေးကနေတဆင့် အပြင်ဖက်က ခြံစည်းရိုး ကျိုးပျက်နေတာနဲ့ ရေတွေအိုင်နေတာကို သွားတွေ့ပြီး မြည်တွန်တောက်တီးတယ်. လူတွေသိပ်ပေါ့လျော့တယ်ပေါ့လေ…
နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ကျိုးပျက်နေတဲ့ ခြံစည်းရိုးကြီးနဲ့ ရွံ့နွံတွေကို ကျော်လွန်ပြီး ဟိုးတောင်ကုန်းလေးပေါ်က အင်မတန်မှ လှပသာယာလှတဲ့ ပန်းခင်းကြီးကို လှမ်းမြင်လိုက်တယ်.
ကဲ.. ပုံပြင်လေးကတော့ ဒါပါပဲလေ…
အလှအပတရားဆိုတာ ခံစားကြည့်မြင်တတ်သူရဲ့ မျက်ဝန်းမှာပဲ မြင်နိုင်တယ်တဲ့…
မန္တလေးမြို့ကြီးက ပူပါတယ်. ခြင်လည်းကိုက်ပါတယ်. ဖုန်လည်း ထူပါတယ်.
ဒါပေမယ့် မန္တလေးရဲ့ ညနေချမ်းတွေမှာ ကျုံးဘေးနားထိုင်လို့ ခင်ဗျား စိတ်ကူးလေးတွေ ယဉ်နေနိုင်တယ်. အေးအေးချမ်းချမ်း အပန်းဖြေနိုင်တယ်.
ဘုရားကြီးကိုသွားမလား၊ အိမ်တော်ရာမှာပဲ တရားထိုင်ဦးမလား.. ရွှေကျီးမြင်ဘုရားထဲက ခရေပင်တန်းလေးတွေအောက်မှာပဲ အေးအေးဆေးဆေး စာအုပ်လေးတစ်အုပ် ထိုင်ဖတ်နေမလား… ဟိုး ဂေါဝိန်ဆိပ်မှာပဲ ကင်မရာတစ်လုံးလွယ်ပြီး ဓာတ်ပုံတွေ လျှောက်ရိုက်နေမလား. ဧရာဝတီမြစ်ကြီးထဲမှာ မျောလာနေတဲ့ ၀ါးဖောင်တွေပေါ်က စဉ့်အိုးကြီးတွေကိုပဲ ကြည့်ရင်း ကဗျာတွေ စပ်နေမလား… စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးနဲ့ မင်းကွန်းဖက်က လေအဝှေ့မှာ လွင့်မျောပါလာတတ်တဲ့ ဆည်းလည်းသံလေးတွေ၊ ခေါင်းလောင်းသံလေးတွေ၊ တရားဓမ္မရွတ်ဆိုသံလေးတွေကိုပဲ နားဆင်ဦးမလား.
လူငယ်ပီပီ ပျော်ပျော်ပါးပါး ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ မန္တလေးတောင်ပေါ်ကိုပဲတက်ဦးမလား၊ မိန်းကြီးနားက Unison လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာပဲ ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်၊ ခံစားချက်တွေကို အရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ ဖောက်ခွဲဦးမလား…
ဖြစ်တယ်. ရတယ်. မန္တလေးမြို့ကြီးက ဒါတွေအားလုံးကို ခွင့်ပြုတယ်. ဖန်တီးပေးထားတယ်. ပေးဆပ်ထားတယ်….
ကျွန်တော် မန္တလေးကို ချစ်တယ်. ကျွန်တော် မန္တလေးသား စစ်စစ်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး. ဒါပေမယ့် မန္တလေးမှာ ကြီးပြင်းအရွယ်ရောက်ခဲ့တယ်. မန္တလေးမြို့ကြီးရဲ့ မွေးစားသားလို့ ဆိုရမှာပေါ့. ဒါပေမယ့် သားအရင်းတွေနီးနီး… သို့မဟုတ် သားအရင်းတွေထက်ပိုလို့တောင် မန္တလေးမြို့ကြီးအပေါ်ကို သာယာမိန်းမောမိတယ်. မြတ်နိုးခင်တွယ်မိတယ်.
စက်ဘီးတစ်စီးနဲ့ မြို့အနှံ့လျှောက်သွားခဲ့ဖူးတဲ့ အတိတ်နေ့ရက်ဟောင်းလေးတွေကို အခု ဒီပို့စ်လေးပြန်ရေးနေရင်းနဲ့ သတိရတမ်းတမိတယ်.
ကျွန်တော် မန္တလေးကို သိပ်လွမ်းတယ်….
(စက်ဘီးစီးခြင်း အက်ဆေးရဲ့ နောက်ဆုံးတစ်ပိုင်းကို မကြာခင် ဆက်တင်ပေးသွားပါမယ်.)
ဆား (၃) ပွင့် :D
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း စထရပ်စ်နည်းနည်းပြန်များလာလို့ youtube ကိုဝင်ပြီး ရယ်စရာတွေ လိုက်ရှာရင်းက ဒီ Stress-killer လေးတွေကို ခလုတ်တိုက်မိတယ်.
Sooooo brilliant and creative....
အလှုငွေ စာရင်းရှင်းတမ်း (၂)
သံဃာကို လှူလော့ ဂေါတမီ။ သံဃာကို လှူဒါန်းခြင်းသည် ငါဘုရားကို လှူဒါန်းခြင်း ဖြစ်၏။
ကျွန်တော်တို့ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး သာသနာ့ဝေပုလ္လကျောင်းတိုက်မှ ဆရာတော် ဦးကောဝိဒ ဦးစီးပြီး မန္တလေးမြို့နှင့် စစ်ကိုင်းမြို့များမှာ EveryoneIT ဆိုတဲ့ အခမဲ့ ကွန်ပြူတာ နည်းပညာသင်တန်းကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနေခြင်းကို ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က ဘလော့ဂါများနှင့် စာဖတ်သူများ သိရှိဖတ်ရှုပြီး ဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်.
အဲဒီ့အတွက် အလှူငွေများ ကောက်ခံခဲ့ရာမှာ တာဝန်ခံတွေ အနေနဲ့ အောက်ပါအတိုင်း ခွဲခြားကောက်ခံခဲ့ပါတယ်.
(၁) မ၀ါဝါခိုင်မင်း - ဂျပန်
(၂) ရွာသားလေး (၀ိုင်တီယူ) - စင်ကာပူ
(၃) July Dream - စင်ကာပူ
(၄) ရန်အောင် - အမေရိကန်
စာရင်းရှင်းတမ်းတွေ လုပ်ရာမှာ လွှဲပြီးသမျှနဲ့ လက်ကျန်ငွေများစာရင်းကို တင်ပေးထားခဲ့ပြီးပါပြီ. ကျွန်တော်တို့ကောက်ခံခဲ့တဲ့ အလှူငွေတွေကို အဓိကအားဖြင့် သုံးပိုင်းခွဲထားပါတယ်. အဲဒါတွေကတော့ တယ်လီဖုန်း၊ တစ်နှစ်စာဆွမ်းအလှူငွေနဲ့ မီးစက်အတွက် ဖြည့်စွက်အလှူငွေတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်.
ဆွမ်းလောင်းအသင်းမှ သံဃာတော်များအား ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းနေစဉ်
ဒီပို့စ်လေးမှာ ကျွန်တော့်ဖက်က ကောက်ခံရရှိတဲ့ အလှူငွေစာရင်းနဲ့ လွှဲပြီးငွေစာရင်း ရှင်းတမ်းသာမက ကျွန်တော်တို့ ကောက်ခံရရှိပြီးသမျှ ရှင်းတမ်းကိုလည်း ရှင်းပြချင်ပါတယ်.
ဒါကတော့ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က ထည့်ဝင်လှူဒါန်းကြတဲ့ ဆွမ်းအလှူရှင်များစာရင်းနဲ့ အလှူငွေစာရင်းရှင်းတမ်းဖြစ်ပါတယ်.
ဒါကတော့ မီးစက်အတွက် အလှူရှင်စာရင်းနဲ့ ကောက်ခံရရှိမှုပါ.
ဒီနေရာမှာတော့ အလှူကောက်ခံခြင်း စာရင်းပိတ်ကြောင်းကို တင်ပြပေးထားပါတယ်. အောက်ဖက်နားကို နည်းနည်းလေး scroll down လုပ်ကြည့်လိုက်ရင် တယ်လီဖုန်း အလှူရှင်စာရင်းကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် ခင်ဗျာ.
အခု ကျွန်တော့်ဖက်က လွှဲပြီးအလှူငွေစာရင်းနဲ့ လက်ကျန်ငွေကို ဆက်ရှင်းပြပေးပါမယ်.
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ တယ်လီဖုန်းအလှူငွေအတွက် ကျွန်တော်ကောက်ခံရရှိတာက အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်.
(၃) ဘလော့ဂါရန်အောင်နှင့် မိသားစုကောင်းမှု ... USD 100
ဒီစာရင်းအရ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၅၀ ကို လွှဲပြောင်းပေးပြီး ဖြစ်ပါတယ်.
ဒုတိယအနေနဲ့ တစ်နှစ်စာဆွမ်းအတွက် အလှူငွေစာရင်းက ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်.
လွှဲပြီး စာရင်း (Transferred)
၁.မနှင်းပွင့်သစ္စာလှိုင် (ယူအက်စ်အေ)မှ တစ်နှစ်စာဆွမ်းအလှူငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၀(US$60.00) နှင့် န၀ကမ္မအလှူငွေ (US$40.00) စုစုပေါင်း USD 100 (လွှဲပြီး)
၂.ကိုမြင့်သူ+မမွှေးမွှေးကြူ ၊ သမီးဇင်မွန်ထက် (ကနေဒါ)မှ တစ်နှစ်စာဆွမ်းအလှူငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၀(US$60.00) (လွှဲပြီး)
၃.ဒေါ်ရီရီစိန် (ယူအက်စ်အေ)မှ တစ်နှစ်စာဆွမ်းအလှူငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၀(US$60.00) (လွှဲပြီး)
၄.ဘလော့ဂါရန်အောင် နဲ့ မိသားစု (ယူအက်စ်အေ)မှ တစ်နှစ်စာဆွမ်းအလှူငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၀(US$60.00) (လွှဲပြီး)
ဒီစာရင်းအရ ကျွန်တော့်ဖက်က အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၈၀ ကို ဇူလိုင် (၁၇) ရက်နေ့က လွှဲပြောင်းပေးပြီး ဖြစ်ပါတယ်.
ဆွမ်းဟင်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းရန်အတွက် မိမိတတ်နိုင်သည့် လုပ်အားဒါနပြုနေသော အမယ်အို၏ စေတနာ...
မလွှဲရသေးသော စာရင်း (On Hold)
၁.ဦးကြံအောင် (ယူအက်စ်အေ)မှ တစ်နှစ်စာဆွမ်းအလှူငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၀(US$60.00)
၂.ကိုမောင်ဇော်မင်း (Fountain Valley, California)တစ်နှစ်စာ ဆွမ်းအလှူငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၀ နှင့် န၀ကမ္မအလှူတော်ငွေ ၄၀ စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀
၃ .ကိုအောင်မောင်မောင် (Sanfransisco, California)မှ တစ်နှစ်စာဆွမ်းအလှူငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၀(US$60.00)
၄.ကိုမျိုးဝင်းသိန်း (Sanfransisco, California))တစ်နှစ်စာဆွမ်းအလှူငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၀(US$60.00)
၅.မစန်းသီတာအောင် (Sanfransisco, California)တစ်နှစ်စာဆွမ်းအလှူငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၀(US$60.00)
၆.မခင်စန္ဒီဝင်း (Sanfransisco, California)တစ်နှစ်စာဆွမ်းအလှူငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၀(US$60.00)
၇.မစိုးစန်းထက် (Sanfransisco, California)တစ်နှစ်စာဆွမ်းအလှူငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၀(US$60.00)
၈. မရွှေစင်ဝေါင်နှင့် မိသားစု (Chicago) တစ်နှစ်စာ ဆွမ်းအလှူငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၀ နှင့် န၀ကမ္မအလှူတော်ငွေ ၄၀ စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀
ဒါကြောင့် ဆွမ်းအလှူတော်ငွေ ဒေါ်လာ ၅၆၀ ကျွန်တော့်ဆီမှာ ကျန်နေပါတယ်.
တတိယအနေနဲ့ မီးစက်အတွက် အလှူရှင်စာရင်းက အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်.
၁. ကိုမြင့်သူ+မမွှေးမွှေးကြူ ၊ သမီးဇင်မွန်ထက် (ကနေဒါ)မှ မီးစက်အတွက် အလှူငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀
ဒီစာရင်းကိုလည်း မလွှဲရသေးပါ. လွှဲရန်ငွေ ဒေါ်လာ ၁၀၀ ကျန်နေပါတယ်.
ဆွမ်းဟင်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းရန်အတွက် မိမိတတ်နိုင်သည့် လုပ်အားဒါနပြုနေသော လုံမပျို၏ သဒ္ဓါတရား
အနှစ်ချုပ်လိုက်ရရင် ကျွန်တော့်မှာ ဆက်လက်လွှဲပြောင်းပေးရမယ့် အလှူငွေစုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၆၀ ကျန်ပါတယ်.
ကျွန်တော်တို့ လက်ရှိ ရေလှောင်ကန်နဲ့ ရေသန့်စက်ကိစ္စကို အကောင်အထည် ဆက်ဖော်နေပါတယ်. အသေးစိတ်ကို မကြာခင် ထုတ်ပြန်ပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာ.